Kuchenesa Mhepo uye Disinfection System fekitori uye vagadziri | SONGZ
Kuchenesa mweya uye disinfection system
Mhepo yekuchenesa maratidziro uye technical technical parameter
Inokodzera kuroora kamwe chete air conditioner:
Inokodzera kudzoka kwakapetwa mweya:
Zvinosvibisa chirongwa Pakutanga kusanganiswa kwezvinhu zvinosvibisa Ratedvhoriyamu yemhepo (m3 / h) Kushanda 1h kubvisa chiyero (%)
Yakasarudzikahyde (HCHO) 0.96 ~ 1.44mg / m3 ﹥4800 90.4%
Kuende (KUE) 1,92 ~ 2.88mg / m3 ﹥4800 91.4%
Yese isingachinjiki makemikari makomputa (TVOC) 4.8 ~ 7.2mg / m3 ﹥4800 92.2%
Chikamu 0.70 ~ 0.85mg / m3 ﹥4800 99.9%
Microorganism Maererano ne GB 21551.3 ﹥4800 99.9%
Mamiriro ekuyedza: 12-mita yakakura yemotokari yevatakurwi, 6 evaporator mafeni, yakanyanya mweya kuyerera oparesheni, yemukati kutenderera
Ion yakasimba ine simba rakasimba redox, inogona kusanganisa uye kuora formaldehyde, methane, ammonia uye mamwe magasi anonhuhwirira (VOC) mumotokari mune kabhini bon dioxide, mvura uye oxygen. Iyo yekubvisa mwero inosvika 95% mushure me1 awa yekushanda.
Ku-gara bvunzo: Mushure memaminetsi makumi maviri neshanu ekuchenesa kwakadzika, PM2.5 yakadzikiswa kubva pa759 μg / m3 (matanhatu-giredhi kusvibiswa kwakanyanya) kusvika ku33 μg / m3 (yekutanga-kirasi mweya mhando), uye iwo mweya wemhando yaive wakanyanya nani.
1. Mune mamiriro ekuvapo, iyo ozone yekugadzira huwandu i0.05ppm, inova yakaderera zvakanyanya kupfuura kukosha kwekuchengetedza kwe0.05ppm. Iyo sterilization rate inosvika 99% mushure memaminitsi makumi matatu ekushanda.
2. Ultraviolet haina simba rinopinda uye haikonzere kukuvadza muviri wemunhu kana isina kunyatsojekeswa; kune photocatalyst rukoko, grille firita yakaturikidzana uye grille musuo wepaneru pakati peiyo ultraviolet sterilization mwenje uye kabhini yekudzivirira kutariswa kwakananga kune vafambi, Inogona kushandiswa zvakachengeteka
Ozone yevasungwa Sterilization rateat 0.05PPM kusangana Mbereko rateat 0.1PPM wevasungwa
maawa ekushanda Maminetsi gumi nemashanu Maminitsi makumi matatu Maminetsi gumi nemashanu Maminitsi makumi matatu
Natural colonies 93.7% 99.8% 98.6% 99.9%
Mamiriro ekuedzwa: Shandisa 0.05ppm uye 0.1ppm O3 yevasungwa kuyedza iyo yekuita sterilization maitiro uye sterilization rate mune 200L yakavharwa mudziyo.
Iyo yekuchenesa mweya maficha uye zvakanakira
1. Matanho mana epakati
Kuvandudza mhando yemweya
Zvinhu Electrostatic guruva muunganidzwa (PM2.5) UV mwenje ionizer Filocatalyst firita
Mbereko × √ √ √
Bvisa VOC √ × √ √
2. Yakasimba ion photocatalytic polymerization tekinoroji, kwevanhu-muchina kugarisana, disinfection uye sterilization:
Proprietary yakasimba tekinoroji, inosanganiswa neUVC ultraviolet, inoshanda okisijeni, isina kunaka ion uye photocatalytic polymerization tekinoroji, zvakazara uye nekukurumidza kuuraya hutachiona uye hutachiona, uye kudzivirira kupararira kwechirwere. Iyo sterilization rate iri 99.9%, uye guruva rekubvisa mwero iri 99.9%. Iyo inogona kunyatso bvisa magasi anokuvadza senge formaldehyde, benzene, ammonia, uye dzakasiyana siyana hwekunhu, utsi, uye hwema mune mota kabhini. Iyo ine anoshanda maitiro emunhu-muchina kugarisana, disinfection isina akafa magumo, uye kusvibiswa.
3. Wedzera mweya isina kunaka ioni oxygen kuti ubvise kuneta kwekufamba.
6 mamirioni asina kunaka okisijeni ions, zorodza mweya, shandisa maseru, kuwedzera hutachiona hwevanhu uye kubvisa kuneta kwekufamba.
4. Kucheneswa kwemweya, kuora kwemweya unokuvadza, kugadzirisa-kusununguka uye hapana zvinoshandiswa.
Yakaiswa mukati memhepo inogadziridza grille, saizi diki haigare inowedzera nzvimbo, kuburikidza neketani yekuita kuti iwedzere kuora gasi rakashatiswa mukabhini, kubvisa PM2.5, PM10 yakaturikwa zvikamu, chengetedza mhepo nharaunda mumotokari nyowani uye ine hutano, kwete zvinoshandiswa panguva yekushandiswa, Kugadziriswa kwemahara.
5. Remote kuongorora, chengetedzo yambiro, akangwara kutonga.
Inogona kuve yakabatana neCAN mutsara wemotokari yese, uye iyo yemhando yemhepo sensor data inogona kuongororwa mune chaiyo nguva padheshibhodhi, uye kungwara switching uye chaicho-chenguva chengetedzo yambiro yeiyo yekuchenesa yekushanda modhi inogona kuitika maererano mhando yemweya; hwindo rekudzoka rine rayo rakazvimiririra rekuratidzira (kuratidza PM2.5 chidimbu chevasungwa, tembiricha, hunyoro uye yemhando yemhepo indekisi, sarudzo), inobvumira vatakurwi kuti vanzwisise mamiriro ekusvibisa kwenzvimbo yemotokari kuburikidza nechiratidziro, zvichiita kuti chigadzirwa chikwire zvakanyanya uye inoshanda pakuonekwa.
6. Kushanda kwakanyanya kushanda, kushomeka kwesimba kwesimba, kushomeka kwekukanganisa mota simba rekushandisa kana kufamba rwendo.
"Dynamic polarization" modhi inovimbisa inogara kwenguva refu uye yakagadzika yekuchenesa kugona, guruva rinobata chinzvimbo chakapetwa kakati wandei kupfuura iyo firita yeiyo yakafanana kutaurwa; inowirirana nemagetsi emagetsi emota yemutyairi, iko kushandiswa kwesimba kweiyo disinfectant purifier module ye12-mita bhazi ingori 10W, yakachengeteka uye inopa simba, yakakodzera Yakashongedzerwa neyakajairika uye emabhazi emagetsi.
Kwayedza yeKunatsa Mhepo
1 Yekubvisa mwero（1h） 99.9%
2 Yakajairwahydehyde kubvisa chiyero （1h） 90.4%
3 Toluene kubvisa chiyero（1h） 91.4%
4 Yekubvisa mwero（1h） 92.2%
5 Xylene kubvisa chiyero（1h） 93.0%
Kukwikwidzana Kwakanyanya kweTIMZ Kunatsa Mhepo
SONGZ yekuchenesa mweya
Yakabatanidzwa yekuchenesa basa
Inoda kufefeterwa nemhepo here? Kufefetedza nemhepo Hapana kubuda
Nzira yekuchenesa mweya 1. Yakasimba ion mweya yekuchenesa system2. Enhanced ozone module (inosarudzika)3. Yakabatanidzwa electrostatic guruva kubviswa
4. Yakabatanidzwa fotocatalyst firita
5. Yakabatanidzwa UV sterilization
1. Motokari UV rambi mbereko2. Kupfapfaidza mushonga unouraya utachiona
Core makwikwi 1.Kubatanidzwa kwese kwese, diki saizi, mashoma mashoma shanduko kumotokari
2. Inogona kubvisa zvinobudirira mhando dzese dzehutachiona, hutachiona, guruva uye chepfu uye inokuvadza magasi
3. Yese mari yeiyo yekunatsa yakaderera. Kana iwe uchida kuisa yakakwidziridzwa ozone module, iwe unongoda chete kuwedzera imwe yekuwedzera mutengo unopfuura zana RMB.
4. Basa rekuchenesa mweya rinogona kuvhurika kana uchitakura vafambi. Iyo yekunatsa mweya pachayo ichagadzira idiki diki yeO3 (ingangoita 0.02ppm, mukati meyakachengeteka renji) kuti uwane chaiyo-nguva yekudzivirira kuita.
5. Kana anti-hutachiona ichidikanwa pamotokari yese, mota isati yavhurwa kana kana pasina munhu mumota, iyo ozone mode yakavhurwa, uye inomira yega mushure memaminitsi gumi nemashanu, inoshanda zvakanyanya uye kuchengetedza simba.
6. Kana iyo kutonhora, kudziyisa uye kufefetedza modes zvisina kuvhurwa, fan yeiyo sterilization system inotangwa otomatiki kwemaminitsi mashanu uye inomira kwemaminetsi makumi maviri. 1. Kuchinja kukuru kumotokari yese, zvinodikanwa kuti uise mwenje yekuwedzera yeultraviolet mumotokari, uye seti yese ye disinfection yemvura spray system inoda kuiswa. Iyo chirongwa chekugadzirisa chakakura uye mutengo wakakwira.
2. Hutachiona nemavhairasi zvinogona kucheneswa, asi hapana kurapwa kwakanaka kweguruva uye zvine chepfu uye zvinokuvadza magasi.
3. Kuchenesa mweya uye disinfection hazvitenderwe pakutakura vafambi. Kana ukaita uye mushure mekuuraya utachiona, saka mweya mweya inodiwa, uye kugona uku kwakaderera.
Kesi dzeKushandisa dze SONGZ Yekunatsa Mhepo Sisitimu
Parizvino, yakave yakapihwa mumabatch epamusoro-kirasi mamodheru emaOEMs saXiamen Jinlong naZhengzhou Yutong.
Isu tinoshuvira kushanda pamwe nemi kuvandudza nharaunda panguva yekufamba kwevanhu uye kugadzirisa mweya mukati memotokari!
Pashure: Bhazi Mhepo Inodzora yeDhivha Decker Bhazi
Zvadaro: Mhepo Inodzora yePassenger Mota